निर्मला पन्तका बुबाआमालाई प्रधानमन्त्रीले के आश्वासन दिए ? «
निर्मला पन्तका बुबाआमालाई प्रधानमन्त्रीले के आश्वासन दिए ?
प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७५, सोमबार १३:४५
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री ओली र निर्मलाका आमाबुवाबीच आज बालुवाटारमा भेट भएको छ । भेटमा ओलीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्न अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कडा कारवाही गरिने बताएका छन् । ओलीले भने–
‛धन, बल, दल वा ओहोदा कुनै हिसाबले शक्तिशाली भए पनि दोषी उम्कन सक्दैन।’
‛घटना मानवतामाथिकै कलङ्क र जघन्य अपराधको भएकाले कडाइका साथ छानबिन र निर्ममताका साथ कारवाही गर्न मैले शुरुदेखि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थिए । तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीको छानबिन र गतिविधि सन्दिग्ध भएकाले निलम्बनसमेत गरियो । र पछिल्लो समयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन पनि गरियो।’
‘प्रारम्भिक छानबिनमा त्यहाँका प्रहरीको भरपर्दा दोषी पत्ता लगाउने काममा ढिलाइ भयो । प्रहरीका अधिकृतले गल्ती वा बदमासी गरेका हुन सक्छन् तर अनुसन्धान पूरा नभइकन आरोप लगाइहाल्न मिल्दैन । त्यसैले राज्यले छानबिन गर्छ । कुनै जुलुस र धर्ना नभए पनि राज्यले कानूनी कारवाही गर्छ । दोषीलाई बचाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ।’
मुन्धुमस्टार डटकम​- गायक, बुद्द राई र अम्बिका राईको स्वर रहेको “मेरो ढुकढुकि” बोल रहेको गीतको
राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन संवैधानिक निकायका लागि २० पदाधिकारी नियुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी छन् । उनले संवैधानिक